China ankle brace miaraka amina orinasa mpamokatra ranomandry | Huanyi
Kitapo gel misy hafanana mikraoba
Kitapo fanampiana migraine
Satroka fanafanana gel mafana
Fonosana ranomandry fonosana
Fonosana ranomandry vozona
Fonosana ranomandry fonosana vozona
Fonosana ranomandry misy tady
Fonosana ranomandry fanaintainana
Fonosana ranomandry miverina
kitapo misy ranomandry
Kitapo gilasy hemorozida
fonosana gel mafana sy mangatsiaka
Fehin-kibo miverina miaraka amin'ny kitapo gilasy
Kitapo misy ranomandry fanampiana ratra amin'ny fanatanjahan-tena
fonosana amam-tànana amin'ny fonosana gilasy
fehin-kitrokely miaraka amina fonosana ranomandry
fonosana amin'ny lohalika amin'ny fonosana gilasy
Kaosy fitsaboana fitsaboana mangatsiaka ho an'ny fikarakarana tongotra
Sock Therapy Mangatsiaka
Fanatsarana sy fikarakarana manokana
fonosana ranomandry endrika molotra
famatrarana maso amin'ny gel
Saron-tava tarehy Beady Gel
saron-tava mason-tarehy gel
labiera mangatsiatsiaka kokoa
kitapo mangatsiaka divay
Tsihy fanamainana biby
Mat Dog Cooling Mat
fandriana fampangatsiahana biby
Kitapo ranomandry reny sy zazakely
Kitapo ranomandry ankizy
Olona azo ampiharina: Mpankafy fanatanjahan-tena eny an-kalamanjana sa olona maratra kitrokely na tongotra
Fampiasana: fiainana andavanandro + Fanatanjahantena + Fanatanjahan-tena
Karazana: Sports compression ankle Brace
Fanamarinana: CE FDA MSDS BSCI REACH ISO9001
Serivisy: Serivisy OEM ODM
Olona azo ampiharina:Mpankafy fanatanjahan-tena any ivelany na olona voan'ny kitrokely na tongotra
Fampiasana: Fiainana isan'andro + Fanatanjahantena + Fanatanjahan-tena
Type: Fanamafisana ny kitron'ny fanatanjahan-tena
Service: Serivisy OEM ODM
Fotoana santionany: 3-10 andro, mandefasa mailaka ho an'ny sarany fandefasana ohatra amin'ny fandefasana.
Famokarana: 15-20 andro aorian'ny fankatoavana ny santionany.
Loko tsotra: 15-30 andro aorian'ny fahazoana 30% petra-bola.
Famolavolana fanontam-pirinty: 15-35 andro aorian'ny fahazoana tahiry 30%.
Ho an'ny baiko maika ,: Mety ho haingana kokoa, mandefasa mailaka mba hifampiraharaha.
Ahoana ny fampiasana ny Ankle Brace miaraka amina ranomandry?
1. Ho an'ny fampiasana mangatsiaka: Ataovy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 1 na amin'ny vata fampangatsiahana mandritra ny 30 minitra.
2. Ho an'ny famonoana mafana: Misy fomba roa hampafana azy:
1) Atsofohy ao anaty lafaoro mikraoba alohan'ny hampiasana azy;
* Mikraoba 700 Watt: 60 segondra
* Mikraoba 1000 Watt: 50 segondra
* Mikraoba 1250 Watt: 45 Faharoa
2) Atsofohy anaty rano mafana mandritra ny 8-10 minitra ilay fonosana na mandra-pahatongany amin'ny mari-pana mahasitrana ara-pahasalamana.
1. Ny fonosana mangatsiaka mafana dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fanafody ivelany.
2. Halaviro ny ankizy sy ny biby fiompy.Raha sendra ny mihinana azy io dia tsy maintsy misotro rano ampy izy, manandrana manandrana mandoa izany ary mitodika any amin'ny dokotera raha ilaina izany.
3. Ireo izay manana olana amin'ny rafi-piaramanidina dia tokony hanantona dokotera mialoha.
1. 10 taona niainana ny OEM, ODM, namboarina loko, sary famantarana, fonosana. Afaka manome anao soso-kevitra matihanina, manampy amin'ny famolavolana vahaolana tsara indrindra ho an'ny vokatra fanamaivanana ny fonosana gel.
2. Ny orinasa dia manana mihoatra ny 20 ny tsipika famokarana, ny akora betsaka sy ny lamba miloko, ny atrikasa Silkscreen dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sary famantarana, afaka manazava ny vokatrao ihany koa izahay.
3. Fanaraha-maso faran'izay tsara mba hahazoana antoka fa hahazo ny entana afa-po ianao.
4. Ho an'ireo fonosana ranomandry miverina, fonosana ranomandry soroka, fonosana gel hemorrhoid, ny orinasanay dia manana habe sy endrika samihafa ho an'ny safidinao, afaka mifanaraka amin'ny olona maro.
Previous: Fonosana ranomandry miverina
Manaraka: fonosana amam-tànana amin'ny fonosana gilasy
Ankle Brace misy fonosana gilasy
Kitapo misy ranomandry sy tongotra
Kitapo gilasy amin'ny tongotra
Adiresy:Tongzhan Road, Meihua Town, Sihong County, Suqian City, faritany Jiangsu, Sina 223900